Midowga Musharixiintu isku aragti ma ka yahiin Rooble? | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Musharixiintu isku aragti ma ka yahiin Rooble?
Midowga Musharixiinta, ayaa u muuqda in ay ku kala jabeen waraaq tixraaceedu ahaa GMMM/17/21, kuna asteyneyd 16 May 2021, oo la sheegay in ay ka soo baxaday Golaha shalay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midowga Musharixiinta, ayaa isku qilaafay waraaq shalay soo baxaday oo lagu sheegay in Musharraxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ay ka walaacsan yihiin in Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, uu ka caga-jiidayo hirgalinta wixii lagu heshiiyay.
Waraaqdaan oo aan loo shaacin sidii loo faahfaahin jiray war murtiyeedyadii ka soo bixi jiray Golaha ayaa waxaa soo dhaweeyay xil-doonayaal ay ka mid yihiin Ridwaan Xirsi Maxamed, oo mar soo noqday Afhayeenka Golaha, Gudoomiyaha Xisbiga Ilays, Cabdiqaaadir Cosoble Cali, iyo Xubno kale.
Waxa ay Ra’iisul Wasaaraha, ku eedeeyeen, inuu xagal-daacinayo wixii lagu heshiiyay, waxayna cabsi ka muujiyeen in Wadahadalka loo madlan yahay uu dib uga dhaco 20-ka May, waxayna ku eedeeyeen inuu galay safarro aan loo baahneyn.
Dhanka kale Madaxii hore ee Warbaahita iyo Xiriirta Madaxtooda Soomaaliya, Xubin sarena ka ah Xisbiga Wadajir, Shadoor Xaaji, ayaa gaashaanka u duruuray waraaqdaan, wuxuuna sheegay in nin kaligiisa iska qortay isagoo sheeganaya magaca Golaha Midowga Musharixiinta.
“Qof ayaa inuu warqad iska soo qorto isagoo magaca Midowga Musharaxiinta ku hadlaya eedeeyn aan loo meel-dayin iska soo ridaya. Ra’iisul Wasaare Rooble waa in waqti la siiyaa laguna kalsoonaadaa. Waxaan uga mahad-celinayaa Midowga Musharaxiinta sida habsamida leh ay ugu heelan yihiin garab-siinta Ra’iisul Wasaaraha” Ayuu yiri Shadoor.
Kala aragti duwanaan in muddo ahba ka dhex jiratay Golaha oo la qarinayay, si aan looga weecan u jeedkii loo aas aasay ayaa hadda la filayaa in ay bannaanka u soo baxado wixii ka danbeeya shirka wada-tashiga ee loo ballan san yahay 20 bishaan.